Maxaa sababay khilaafka cusub ee siyaasiyiinta Soomaaliland? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa sababay khilaafka cusub ee siyaasiyiinta Soomaaliland?
Mid ka mid ah labada garab ee guddiga doorashooyinka xildhibaannada gobollada Waqooyi, ayaa eed kulul u jeediyay guddoomiyaha guddiga doorashada heer Federaal.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirkii hore ee Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir ‘Maareeye’ oo ka tirsan garabka uu hoggaamiyo Guddoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ayaa caddeeyay inuu jiro khilaaf xooggan oo ka dhex qarxay garabyada guddiga doorashooyinka Somaliland.
Maareeye, wuxuu tilmaamay in khilaafka cusub uu ka dambeeyay, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer Federaal, Maxamed Xasan Maxamed ‘Cirro’ wuxuuna ku eedeeyay inuu jabiyay qodobbo ka mid ah heshiiskii doorashooyinka ee Muqdisho lagu saxiixay 27-kii May.
Wuxuu xusay in isku day sharci darro ah oo Guddoomiye Cirro ku doonayay inuu ku qabto doorashada guddoonka guddiga Soomaaliland uu hakiyay Ra’iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta, maadaama hore loogu heshiiyay in Rooble garwadeyn ka noqdo doorashooyinka kuraasta Gobollada Waqooyi.
Hayeeshee, wuxuu sheegay in ugu danbayn uu Cirro qabtay doorasho hal dhinac ah 10-kii bisha, taas oo horseedday in garabkii kalana qabsado doorasho gooni u xiran.
Maareeye, wuxuu caddeeyay kadib maarkii khilaafku soo shaac baxay, in la isku afgaratay in labada doorashaba wax kama jiraan laga dhigo, xalka arrintana loo daayo xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha, taas oo uu sheegay in uu wali ka biya diidsan yaahay Cirro.
Sida ku cad heshiiskii doorashooyinka, Ra’isul Wasaaraha Xukuumadda xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa masuul ka ah habsami u socoda, doorashooyinka kuraasta Soomaaliland, isagoo talo galinaya Guddomiyaha Aqalka sare Cabdi Xaashi iyo Ra’iisul Wasaare ku xigeynkiisa Mahdi Guuleed.
Tan iyo markii ay billowdeen Shir Madaxeedyadii looga hadlayay xalka arrimha doorashooyinka bartamihii sanadkii hore, si guud khilaafka siyaasiyiinta reer Waqooyi, wuxuu ahaa mid ka mid ah labada arrin ee ugu adkaa.